जब पाँचखालका मेयरले आफ्नै कोट फुकालेर बृद्धालाई लगाइदिए………. « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
जब पाँचखालका मेयरले आफ्नै कोट फुकालेर बृद्धालाई लगाइदिए……….
६८ वर्ष उमेर । दाह्री, जुंगा, कपाल सेत्तै । साहारा बैशाखी । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ११ खेरलथोकका गोपालप्रसाद खरेलको पहिलाको परियचय । तर केहि घण्टा बित्यो उनको परिचयमा एउटा चिज थपिएको छ मेयरको कोट उपहार पाउने ।
छोराको केहि वर्षअघि सडक दुर्घटनामा मृत्युभएपछि गोपाल र उनका श्रीमती मात्रै बस्छन घरमा । नातानातिलाई विभिन्न परोपकारी संघसंस्थाको सहयोगमा गाउँभन्दा टाढाको विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ ।
बैशाखी बिना हिड्डुल गर्न सक्दैन गोपाल । १६ वर्षभयो उनको साहारा बैशाखी बनेको । शरीरिक रुपमा अशक्त उनीले राज्यबाट अपांगता भत्ता पाउँछन् । तर परिवारको गर्जो टार्न हम्मेहम्मे पर्छ । अपाङ्गता परिचयपत्र (ख) बाट (ग) झरेपछि दैनिकी टार्न झनै समस्या हुने भएको छ । तर जसो तसो गुजरा त चलाउँनै पर्यो ।
विहीबार उनी नगरपालिकाको कार्यालय पुगे त्यहि भत्ता पाउने कार्ड नवीकरण गर्न । उनको मनमा धोको थियो, मेयरलाई भेटेर केहि आफ्नो दुःखका कुरा साटौँ र गाउँको समस्या सुनौँ । मेयर महेश खरेल पनि कार्यालय पुगिसकेका थिए । शुक्रबार ल्होछारको सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले विहीबार कामको अलिक चाप थियो कार्यालयमा । मानिसहरुको चहलपहल पनि ।
तै पनि मेयर खरेलसँग भेट्ने इच्छा पुरा भयो गोपालको । दुःख सुनाए । ध्यान पुर्वक कुरा सुने मेयर खरेलले । बृद्धा गोपालको कुरा सुन्दा निकै भावुक बनेका मेयर खरेलले सहकारीबाट बृद्धाले लिएको ऋण तिर्ने बाचा गरे । गोपालले सामुदायिक सहकारीबाट १८ हजार ऋण लिएका थिए । खानेपानीका लागि । ‘ब्याजपनि ८ सय रहेछ । मैले पाँचखालमै रहेको सहकारी कार्यालयमा फोन गरे । गोपाल बाले लिएको पैसा सावाँ ब्याज सबै मैले तिर्छु भने । शुक्रबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार तिर्छु । मेयर खरेलले भने ।’
गाउँको समस्या पनि मेयरलाई सुनाए गोपालले । उनको गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या छ । खानेपानीको शुल्क तिर्नकै लागि गोपालले प्रत्येक महिना १ हजार ३ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने सुनाए । गाउँको समस्या अनि घरको दुःख सुनेका मेयरले गोपालको शरीरमा हेरे । बृद्धा उमेर । जाडो मौसम । मेयरले बृद्धाको आङमा हेर । पर्याप्त कपडा देखेनन । अनि सोधे कपडा यत्ति हो ? गोपालले आफुसँग भएकै यतिमात्रै हो भने पछि मेयर खरेलले आफ्नै आङमा लगाइरहेको कोट फुकाले र बृद्धालाई लगाइदिए ।
मेयर खरेलले बृद्धालाई कोट मात्रै लगाइदिएनन । गाउँमा खानेपानीको समस्या पनि छिट्टै समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।